Homeरोचक / विचित्रयी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले eBay मा बेचौं !
November 6, 2017 Spnews रोचक / विचित्र 1
‘मन्दिर गएको’ सपना देख्नुको अर्थ के हुन्छ ?
आइतवार देखि शनिवारसम्म कुन बार के काम गर्दा हुन्छ फाइदा ? वास्तु शास्त्रले यसो भन्छ !
February 13, 2019 Spnews रोचक / विचित्र 6
जमाना यति छिटो परिवर्तन भयो कि मान्छे हरुले जे पनि अनलाइनमै काम गर्न लागे । अनलाइन बाट श्रीमती पाउँछन, अनलाइन बाटै नोकरी पाउछन भने पढाइ पनि अनलाइन मै हुन् थालेको धेरै भएको छैन । इन्टरनेटको […]
Hello sir plz contact me at kailadeu@gmail.com I have some old coins n note